ब्लाष्ट टाइम्स । www.blast.com.np ﻿
वुधबार, 8 जेठ, 2070
विचार अन्तर्गतका सामाग्रीहरु :-
एक निर्भिक वकिल	शनीबार,4जेठ, 2070
पूर्वाञ्चलमा मात्र नभएर मुलुककै न्याय क्षेत्रका एक उज्ज्वल नक्षत्र वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणराज खरेलको निधनले कानुनको क्षेत्रमा ठूलो रिक्तता थपेको छ ।	आँप: अमृतबाट विष बन्दै	वुधबार, 1 जेठ, 2070
हुन त आापको पाक्ने सिजन असार अन्तिमदेखि साउन–भदौसम्म हो तर नेपाली बजारमा भने बैशाखको शुरुदेखि नै आापले कृषि बजार पहेंलै बनाउन थाल्छ ।	एमाओवादीको राजनीति	मगलबार, 31 बैशाख, 2070
राज्यसत्ताबाहेक सबै भ्रम हुन् भन्ने माक्र्सवादी मान्यता तत्कालीन माओवादीको आधारभूत नीति थियो । वर्गीय समाजमा राज्यसत्ता वर्गीय हुने सार्वभौमिकतालाई यसले स्वीकारेको थियो ।	‘लोकमानतन्त्र’ को सन्देश	सोमबार, 30 बैशाख, 2070
-डम्बर खतिवडा देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबाट धेरै संवेदनशील नागरिक आश्चर्यचकित छन् । के भइरहेको हो यो ? किन र कसका लागि ? कसको हित रक्षाका लागि कुन बाटोमा जाादैछ देश ? के देश केही मानिसहरुको पेवा वा बिर्ता हो ? देश केही शीर्ष र शक्तिशाली भनिएकाहरुको शौख र स्वार्थसिद्धिको साधन हो ? अन्यथा यी निर्लज्ज खेलहरु किन शृङ्खलाबद्ध छन् ? कुनै अपराधकथामा बनेको हिन्दी सिनेमाका खलनायकहरुको जस्तो चरित्र किन बारम्बार प्रस्तुत गर्दैछन्, हाम्रा शीर्ष नेताहरु ? यी सबै कुकर्म गरेबापत उनीहरुको मनमा अलिकति पनि लज्जा, ग्लानी र अपराधबोधको अनुभूूति उत्पन्न हुादैन ? हुादैन भने यी कस्ता मानिस हुन् ? के हो यिनीहरुको नैतिकता र संवेदनाको स्तर ? यिनीहरु यति धेरै तल गिर्न सक्छन्, हामीमात्र किन यिनीहरुलाई शीर्ष मानिरहन बाध्य छौं ? उनीहरु आपैंm इतिहासको रच्छ्यानमा मिल्किन तयार छन्, हामीमात्र किन उनीहरुलाई कााधमा बोकिरहने ? के सार्वभौम नागरिकहरु जन्मादै यिनीहरुको ऋण खाएर जन्मिएका करियाहरु हुन् ? एक्काईशौं शताब्दीको दोस्रो दशक र गणतन्त्र स्थापनापछिको करिब एक दशकपछि पनि यी हाम्रा स्वघोषित शासकहरु यति धेरै क्रूर, संवेदनाहीन र गैरजिम्मेवार हुन सक्छन् भने यी हिजोका राणा, शाह र पञ्चहरुभन्दा कहाानेर फरक छन् ? श्री ३ र श्री ५ हरुमा भन्दा कुन दृष्टिकोणले फरक छ श्री ४ हरुको गति र मति ? के ठानेका छन् यिनीहरुले ? के इतिहासले यिनीहरुलाई सधैं माफी दिने छ ? श्री ३ र श्री ५ हरु आजका श्री ४ हरुभन्दा कम शक्तिशाली थिएनन् कुनै समय, कहाा छ आज उनीहरुको शक्ति ? शक्तिशाली हुनुको भ्रमले ग्रस्त भएर कथित शीर्ष नेताहरु आज जनभावनामाथि जुन खेलबाड गर्दैछन्, ढिलोचााडो यसको मूल्य उनीहरुले अवश्य चुकाउनुपर्ने छ ।	मातृ औंशीको प्रतिकात्मक महत्त्व	बिहीबार, 26 बैशाख, 2070
आज मातातीर्थ स्नान अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन । संसारका प्राय:जसो मुलुकमा जन्म दिने आमालाई सम्मान गर्ने र सम्झने दिनका रुपमा झैं नेपालमा पनि आमालाई सबैभन्दा ठूलो मानी सम्मान, श्रद्धा, माया, आदर देखाउने दिनका रुपमा मातातीर्थ औंशीलाई लिइन्छ ।	नेपाली कांग्रेस इतिहासमा सीमित नहोस्	वुधबार, 25 बैशाख, 2070
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसमेनको अर्थ जनताबाट चुनिएका विधायक तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि सदस्य वा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ सदस्य र सिनेट सदस्य भन्ने बुझिन्छ ।	लेनिनवादको अन्तर्वस्तु र औचित्यबारे बहस–११	सोमबार, 23 बैशाख, 2070
-डम्बर खतिवडा उपर्युक्त विषय नै लेनिनवाद र ‘जबज’ बीचका आधारभूत तुलनायोग्य विषय हुन् । यी मापदण्डलाई आधार बनाएर हेर्दा यी दुई सिद्धान्तबीच थुप्रै भिन्नताहरू देखिन्छन्् ।	अस्थिर राजनीतिको चपेटामा नेपाली प्रेस	शनीबार, 21 बैशाख, 2070
मे ३ अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । नेपालमा पनि पत्रकार र पत्रकारको हकहित तथा सूचनाको हकको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले यो दिवस विशेष चासोका साथ मनाउने गरेका छन् ।	खानेपानीको समस्या: संस्थानको व्यवस्थापकीय कमजोरी	शनीबार, 21 बैशाख, 2070
सदाभैंm यो वर्ष पनि धरानवासीलाई खानेपानीको समस्याले ज्यादै पिरोल्यो । धेरैजनाका घरमा हप्तौं पानी नआउादा खानेपानी संस्थाका हाकिमको टेबुल ठोक्न जानु पर्‍यो ।	भर्खरै प्रकाशित समाचारहरु
‘भण्डारीको विचार अनुसरण गरे निकास’
अख्तियारले स्थानीय निकायमा हस्तक्षेप गर्ने
कोरियामा नेपालीद्वारा आत्महत्याको प्रयास
नेकपा–माओवादीद्वारा विद्यालय कब्जा
नगरपालिकाले जग्गा खाली गरायो
भूपू सैनिक कल्याणकारी संगठनको सम्मेलन सम्पन्न
एक निर्भिक वकिल
बहुप्रतीक्षित पिंगुवा सिंचाई आयोजना पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन हुने
आँप: अमृतबाट विष बन्दै
गुगलका केही उपयोगी उत्पादनहरु
इन्द्रेणी रङ्ग पोख्दै कोमल ओली
निजी विद्यालयको चौघेराबाट
विवशका बिन्दास गजल र स्ल्यम
सिर्जना र समाज जोडौं
यौन सुख बढाउने केही उपायहरु
खोप लगाऔं, जीवन बाचाआं
कतारमा नेपालीलाई ९ करोडको चिठ्ठा
भोजपुर गोल्डकपको उपाधि काठमाडौंलाई
तेह्रथुममा जलश्रोतः सम्भावना र चुनौती
जलस्रोतः सम्भावना र चुनौती
श्रीजुङको यात्रा सम्झना
झापाका “किसान” जाति
“लोडसेडिङका कारण प्रतिष्पर्धा गर्न गाह्रो छ”
‘निर्वाचनको मिति चाँडै घोषणा’दलले भूमिका खेल्नुपर्छ: निर्वाचन आयुक्त
8 जेठ, 2070	7 जेठ, 2070	4 जेठ, 2070	3 जेठ, 2070	2 जेठ, 2070	1 जेठ, 2070	31 बैशाख, 2070	पुराना अंकहरुलाई छापामा प्रकाशित (मुद्रीत) आकारमै हेर्नको लागी PDF फर्म्याटमा डाउनलोड गर्नुहोस ।
सर्वाधिकार : पुर्व क्षीतिज प्रकाशन प्रा ली का लागी ब्लाष्ट टाईम्स मा समर्पित , यस साईट प्रकाशित सामग्री बिना अनुमती प्रयोग गर्न पाईने छैन् । सम्पर्क : फोन न : ०२५ ५२५४५८ (बिज्ञापन) / ०२५ ५३३४१४ (समाचार डेस्क), daily@blast.com.np